Wicitaanka Dhageystaha - VOA
Axad 9 January 2022
Wicitaanka Dhageystaha: Sidee dumarka Soomaaliyeed u arkaan khilaafka madaxda dowladda?
Barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha ee toddobadakan wuxuu ku saabsanyahay; sida ay haweenka Soomaaliyee u arkaan khilaafka soo noq-noqda ee madaxda dowladda Soomaaliya.
Wicitaanka Dhageystaha: Halista isticmaalka maandooriyaha ee dhallinyarada Soomaaliyeed
Barnaamidka Cicitaanka Dhageystaa ee toddobadakan wuxuu ku saabsanyahay; khuburada Caafimaadka Soomaaliya oo dhigay nooc cusub oo daroogo ah ku soo korortay suuqada waddanka, taas oo halis ku ah dhallinyarada sida uu sheegay Dr. Maxamed Maxamuud Fuje.
Wicitaanka Dhageystaha: Waa sidee xaaladda amni ee magaalada Muqdisho?
Barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha ee toddobaadkan wuxuu ku saabsanyahay xaaladda amni ee magaalada Muqdisho, waxaana dhageysteyaasha kala qeybgalay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdifitaax Aadan Xasan.
Wicitaanka Dhageystaha: Kaalinta bulshada rayidka ee doorashooyinka
Wicitaanka Dhageystaha: Caqabadaha ay wajaheyso doorashada golaha shacabka
Wicitaanka Dhageystaha: Heshiiska Farmaajo iyo Rooble
Wicitaanka Dhagaystaha: Maxaa sabab u ah dib u dhaca doorashada?
Wicitaanka Dhageystaha: Maxay DF ka baran kartaa dhicitaanka dowladdii Afghanistan?
Wicitaanka Dhageystaha: Xogta muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya
Barnaamijka Wicitaanka Dhagaystaha waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya, oo Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda (ICJ) ay sheegtay inay xukmin doonto 12-ka October 2021.